Siyakhathala, World of Amulets Ukuzibophezela Komphakathi
Ithimba leWorld of Amulets belilokhu libandakanyekile ekuzibophezeleni komphakathi nasekuzinikeleni ekwenzeni ngcono izimpilo nezimo zomphakathi esihlala kuwo. Kungaba ngokuxhasa amaphrojekthi wendawo, ukuhlanza amahlathi namabhishi, izikhathi zamahhala ze-reiki, njll ..., ukusungulwa kwethu amalungu akhombise intshisekelo enkulu nokukhathazeka kulezi zindaba.
Ngemuva konyaka onzima kakhulu kwabaningi benu ngenxa yobhadane lwe-covid-19, sithathe isinqumo sokuqhubekisela phambili ukuzibophezela kwethu kwezenhlalo. Yize u-2020 kube unyaka onzima futhi oyinselele kithina futhi, sicabanga ukuthi, njengenkampani ephendula umphakathi, iWOA ingenza okuningi. Ngakho-ke saqala ukuhlola indlela engcono kakhulu yokusiza umphakathi wethu ngendlela ephumelela kakhulu.
Njengoba kunezimbangela nezidingo eziningi kube nzima kakhulu ukuthola isizathu sokweseka (futhi ngenxa yemikhawulo yokunyakaza ngenxa yalolu bhubhane) ekugcineni sinqume ukuxhasa inhlangano eyi-1 ehlanganisa futhi esekela izimbangela eziningi emhlabeni jikelele.
Sikhuluma ngenhlangano esiza izinto esobala kunazo zonke: iLions Club International. Sibona sengathi ngeLions Club International Foundation (LCIF) singafinyelela kubantu abaningi lapho kubaluleke khona (ungathola imininingwane eminingi ngeLions Club lapha)
Phakathi kwezimbangela ezisekelwa yi-LCIF, impendulo yesifo se-covid-19, ukulwa nesifo sikashukela, ukugcina ukubona, ukunika amandla intsha, ukulondolozwa kwemvelo, nokunye okuningi.
Ngonyaka wezimali owedlule, i-LCIF yakhipha izibonelelo eziyi-1,360, okungaphezu kwezigidi ezingama-US $ 41.
Kepha le mali idinga ukuvela ndawo thile.
I-WOA inqume ukuqala iphrojekthi yezimali ukuze kusizakale i-LCIF ngokunikela nge-1 € nge-oda ngalinye elenziwe kusayithi lethu ukuxhasa izimbangela zeLions Club Foundation. Lezi zimbangela kungaba ezasekhaya noma ezamazwe omhlaba.
Kusukela ngo-februwari 1 2021 sizoqala ukunikela ekupheleni kwenyanga ngayinye i-1 € nge-oda ngalinye elenziwe kuwebhusayithi yethu esemthethweni kanye nesikhulumi se-Etsy sihlangene. Lokhu kuyisiqalo nje ngoba sifuna ukufinyelela ekupheleni kuka-10% weminikelo yokuthengisa. Yonke iminikelo izoshicilelwa kuleli khasi ukuze kube sobala futhi kungaboniswana nabo eLions Club International.
Siyabonga ngokuthenga ku-World of Amulets nokusiza abantu emhlabeni wonke.
Ikhalenda Leminikelo 2021
Inyanga Isizathu donation
February Umdlavuza wezingane $ 189
March Amabhubesi Club Valencia $ 173
Ephreli Earth day + Lions Club Nomads
Kwangathi Lions Club Nomads
June Ama-Sightfirst & Leaderdogs wezimpumputhe
July Lions Club Nomads
September Isikhwama Sezinhlekelele